India: Ho avin’i Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
India: Ho avin'i Wikipedia
Voadika ny 10 Jolay 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Magyar, srpski, Ελληνικά, বাংলা, 日本語, English
Wikipedia, ny rakipahalalàna an-tserasera tsy andoavam-bola, no mankalaza ny tfahafolo taonany amin'ity taona ity, ary nananika ny 100 ny tanàna tao India nisoratra anarana hampiatrano ny fankalazana, ny isa avo indrindra ho an'ny firenena rehetra.
Ny Wikipedia no vohikala fahaefatra malaza indrindra any India, arymihoatra ny 20 vohikala Wikipedia amin'ny fiteny Indiana, ary mbola maro ny eny an-dalana. Vao najoron'ny Fondation Wikimedia vao haingana tao Bangalore ny Toko India, handrindra ny vohikala Wikipedia amin'ny teny Indiana. Amin'ity taona ity ny Fondation Wikimedia no hanokatra birao voalohany ivelan'i Etazonia, amina tanàna iray any India araka ny nambara.
Ny Global Voices dia tafaresaka tamin'i Tinu Cherian, mpamaham-bolongana, active Wikipediana mavitrika sady mpitantana ny vohikala, momba ny Wikipedia eto India.
Tinu Cherian (photo reproduced with permission)
Global Voices (GV): Misy zavatra kely azonao ambara momba ny vondrona Wikipedia eto India ve?
Tinu Cherian (TC): Teraka vao haingana ny vondrona Wikipediana eto India saingy iray amin'ny fatra-pitombo indrindra ny mpisera aminy. Mianoka ny dimy be mpamaky indrindra ny Wikipedia sy ny tetikasa namany eto India saingy mbola ambany ihany ny ambaratongan'ny mpanitsy sy ny mpandray anjara ao amin'ny Wikimedia raha oharina amin'ny firenen-kafa. Noho ny fironan'ny milina mpikaroka sy ny fahabangan'ny loharanom-pahalalàna tsy andoavam-bola tahaka itony dia tsy olana mihitsy ny momba ny mpamaky.
Ny Wikimeetups dia fihaonana na vovonana ifanatrehana mivantana eo amin'ny samy Wikipediana, izay efa malaza mihitsy eto India. Tamin'ny Sep 2006 i Jimmy Wales no nanketo Bangalore ary nahita ny Wikimeetup voalohany teto India. Nahaliana sy nampientanentana ny maro ihany koa ny Wikiconference tao Chennai tamin'ny 2007 saingy tsy naharitra. Hatramin'ny Jolay 2009 no nataonay ho fanao mahazatra ny Wikimeetups teto Bangalore, fihaonana izay tanterahina indray mandeha isam-bolana farafahakeliny. Manana fihaonana mahatra ihany koa ankehitriny ny Wikipediana eto India any an-tanàna hafa tahaka an'i Mumbai, Delhi, Kolkata, Pune ary Hyderabad.
Neken'ny Fondation tamin'ny fomba ofisialy ny Toko Wikimedia India tamin'ny 2010 ary tafiditra tanatin'ny rafitra tamin'ny 2011. Nihoatra ny 95 ny tanàna teto India nisoratra anarana handray ny fankalazana faha-10 taonan'ny Wikipedia amin'ity 2011 ity, ny betsaka indrindra amin'ny firenena rehetra. Nahitana mpanatrika mihoatra ny 250 ny fankalazana teto Bangalore ho an'ny iray andron'ny programa.
Ny 2010 no nahitan'ny Fondation Wikimedia an'i India ho iray amin'ny toerana stratejika hampivelarana ny Wikimedia ary efa manakaiky ny fananganana birao voalohany indrindra hatrizay hatrizay ivelan'i Etazonia.
GV: Mety ho tsapanao ve hoe tahaka ny ahoana ny lazan'ny vohikala amin'ny teny anglisy raha oharina amin'ny vohikala miteny anglisy? Iza no vohikala miteny Indiana lehibe indrindra?
TC: Ny Wikipedia teny anglisy hatrany no be mpankafy sady Wikipedia malaza kokoa any India saingy efa mihaliana amin'ny Wikipedia amin'ny teny Indiana isan-karazany ny olona. Efa misy 20 fiteny ny Wikipedia amin'ny teny Indiana ary misy fiteny 20 hafa no eo am-piketrehana. Assamese, Punjabi, Nepali, Oriya (Odia) ary Malayalam no fiteny Indiana tao amin'ny Wikipedia tamin'ny 2002. Hindi, Tamil, Bengali ary ny hafa no nijoro koa roa taona nanaraka. Misy ny ambaratongam-pahazotoana teo amin'ny fiteny isan-karazany tao amin'ny Wikipedia. Malayalam, Tamil, Telugu ary Bengali no vondrona Wikipedia tena nazoto indrindra. Hindi no manana lahatsoratra betsaka indrindra ary efa hihoatra ny 1 lakh [100 000] tsy ho ela ny vitany. Efa eo ampananganana ny vondrona Wikipedia matoritory izahay amin'ny fanairana ny mpiteny ireo vondrona matoritory ireo.
GV: Momba ny fahazoa-miditra amin'ny aterineto – moa ve tsy lasa miankina amin'ny olona manana fahazoa-miditra aterineto ny Wikipedia ?
TC: Ny Wikipedia dia miompana amin'ny fitambaran'ny fahalalana ananan'ny olombelona rehetra. Ny tsininy, niorina tao amin'ny tamin'ny tranonkala manontolo izany. Ankehitriny moa ny mpi-Wikipedia dia miezaka ny mitondra azy ho an'ireo tsy manana aterineto, amin'ny famoahana dika tsy an-tserasera ny Wikipedia. Ny Wikipedia Malayalam no namoaka Kapila mangirana (CD) Wikipedia ivelan'ny aterineto voalohany ho an'ny endri-tsoratra tsy latina. Ny Malayalam ihany koa no eo an-dalan'ny famoahana voalohany ny Wikisource amin'ny fiteny Indiana rehetra.
GV: Monina ao Bangalore ianao, noho izany dia te-hamantatra ny valin'ny fanontaniana izahay: Mumbai, New Delhi sa Bangalore? Iza no toerana tsara indrindra ho an'ny Fondation Wikimedia eto India?
TC: Amin'ny maha-Bangaloreana ahy, ny hevitro manokana, tiako ny mahita ny biraon'ny Wikimedia eto Bangalore. Manana fiarahamonina Wiki mihetsiketsika amin'ny fampiroboroboana ny fiteny samihafa ao amin'ny Wikipedia i Bangalore. Mihaona tsy tapaka ny mpi-Wikipedia eto Bangalore, farafaharatsiny indray mandeha isam-bolana. Bangalore ihany koa no (foiben’) ny toko Wikimedia India. Saingy ho fampivelarana ny hetsika Wikimedia manerana an'i India, dia torohevitra ny manondro an'i Mumbai na i Delhi. Saingy an'ny Fondation Wikimedia madiodio ny manapa-kevitra izay heveriny ho azo atao sy mety. Ankehitriny moa ny Fondation efa mihevitra tanteraka ny ho ao Delhi na ny Renivohitra Nasionalin'ny Faritra (NCR).
GV: Mazoto dia mazoto ianao ao amin'ny Twitter, ary manana mpanaraka mihoatra ny 56.000. Misy ifandraisany amin'ny fahazotoanao anaty valantserasera sy ny firotsahanao lalina amin'ny Wikipedia ve izany?
TC: Tiako hatramin'izay ny mifandray aman'olona na amin'ny tontolon'ny serasera izany na amin'ny fiainana andavanandro. Mizara fahalalana ao amin'ny Wikipedia aho ary mizara vaovao sy fampahalalana hafa ao amin'ny Twitter. Ny Twitter no fomba ifandraisako amin'ny mpiresaka manerantany. Mazava loatra fa mpiresaka momba ny hetsika Wikipedia sy Wikimedia ao amin'ny Twitter ihany koa aho.